Alatsinainy 25 Mey 2020. – FJKM
Olona manana ny Fanahy Masina
Notsaraina teo amin’ny Synedriona i Petera sy Jaona noho ny nanasitranany ilay lehilahy malemy.Norarana tsy nahazo mitory sy manambara ny amin’i Jesoa intsony izy ireo . Ny Fanahy kosa :
1-Mampijoro ny mpino
Mafy dia mafy ny fandrarana nahazo an’i Petera sy Jaona tsy hitory ny Anaran’i Jesoa Kristy intsony .Tandindomin-doza ny fiainany raha mbola mikiry manao izany izy ireo .Mazava anefa ny fanambarany : »Fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitany sy renay « .Ny olona manana ny Fanahy Masina dia tsy voasakana , tsy matahotra , miroso , mijoro hatrany hanambara an’i Jesoa .
Manoloana ny fanambarana nataon’i Petera sy i Jaona dia very hevitra ireo mpikambana tao amin’ny Synedriona .Tsy hitany izay antonjavatra « hampijaliana » azy ireo ary indrindra noho ny vahoaka resy lahatry ny asa notanterahina ka nankalaza an’Andriamanitra (and21).Vokany : nalefany izy ireo . Mariky ny fandresena ny fampihorohoroana izany.
Rehefa tafaverina teo aminn’y mpianatra i Petera sy Jaona dia nitantara ny toe-javatra natrehany .Ny fahafantaran’ny mpianatra izany toe-javatra izay sy ny fisian’ny fanenjehana dia nanosika azy ireo hivavaka amin’Andriamanitra ka nametraka ny adiny sy ny asa fanompoana izay tsy maintsy hotanterahiny amin’Andriamanitra.
Nahoana no misy mpino kristiana tsy sahy mijoro vavolombelona manoloana ny fanenjehana na ny sakana?